नेपालमा सँगै रक्सी खाएर बस्नलायकका युवती नै छैनन् । कुमार नगरकोटी, साहित्यकार | युनिभर्सल खबर
Home मनोरञ्जन नेपालमा सँगै रक्सी खाएर बस्नलायकका युवती नै छैनन् । कुमार नगरकोटी, साहित्यकार
नेपालमा सँगै रक्सी खाएर बस्नलायकका युवती नै छैनन् । कुमार नगरकोटी, साहित्यकार
Posted By: युनिभर्सल खबरon: October 06, 2017 In: मनोरञ्जन, सेलेब्रेटीसंगको कुराकानी
दाह्री किन पाल्नुहुन्छ ?
खासमा भन्ने हो भने मैले दाह्री पालेको होइन, नकाटेको हो ।
त्यसो भए दाह्री नकाटेको कति भयो ?
३ वर्ष भयो । त्यसभन्दा पहिला म क्लिन सेफ गर्थेँ ।
तपाईंलाई खुकुरी चुरोटको ब्रान्ड एम्बेस्डर नै भनिन्छ । किन होला ?
ब्रान्ड एम्बेस्डर केही पनि होइन । हरेक चिजमा आफ्नो च्वाइस हुन्छ । मलाई चाहिँ खुकुरी चुरोट मनपर्छ ।
एक दिनमा कतिवटा चुरोट पिउनुहुन्छ ?
एक बट्टा सिध्याउँछु ।
कहिलेकाहीँ खल्तीमा चुरोट सिद्धिएको वेलामा कसैसँग मागेर खानुभएको छ ?
आजकालचाहिँ मागेर खाँदिनँ । पहिलाचाहिँ कहिलेकाहीँ माग्थे ।
बाटोमा भेटिएको चुरोटको ठुटो सल्काएर खानुभएको छ ?
धेरै खाएँ । आजभन्दा १६, १७ वर्षअघि आफूसँग खल्तीमा भए पनि ठुटो भेटेपछि सल्काइहाल्थे । यसरी ठुटो चुरोट सल्काउँदा मज्जा आउँथ्यो
रक्सी कत्तिको पिउनुहुन्छ ?
मैले रक्सी पिउँन छाडेँ । पहिला नै दुई–तीन जुनीलाई पुग्ने गरी पिइसकेँ ।
मैले रक्सी पिउँन छाडेँ । पहिला नै दुई–तीन जुनीलाई पुग्ने गरी पिइसकेँ । म पाटनका रक्सी पसल धेरै चाहर्ने मान्छे हुँ । त्यहाँका भट्टीहरूको अन्तिम ग्राहक मै हुन्थेँ । तर, अहिले मदिराबाट डिभोर्स लिइसकेको छु ।
प्रायः कुन ब्रान्डको रक्सी पिउनुहुन्थ्यो ?
मैले पिउने रक्सीको कुनै ब्रान्ड नै हुने थिएन ।
युवतीहरूसँग बसेर रक्सी खानुभएको छ ?
नेपालमा सँगै रक्सी खाएर बस्नलायकका युवती नै छैनन् । त्यसैले युवतीहरूसँग बसेर रक्सी खाइनँ ।
विदेशी युवतीसँग चाहिँ खुब खानुभएको छ ?
मसँग युवतीसँग बसेर रक्सी खाएको अनुभव नै छैन ।
युवतीलाई हेप्नुभएको हो ?
हेपेको होइन । म बाहिरी सुन्दरता मात्र हेर्दिनँ । मलाई बौद्धिक, सुन्दरी, रहस्यमय खालको, फिलोसपी, कलाजस्ता कुराहरू भएको केटीसँग रक्सी खान मनपर्छ । तर, त्यस्तो युवतीचाहिँ भएनन् मात्र भन्न खोजेको हुँ । यदि यस्ती युवती पाएँ भने रक्सी मात्रै किन, विष नै खान्छु ।
तपाईंका रक्सीका भट्टीहरू कहाँकहाँ छन् ?
म पाटनका रक्सी पसल धेरै चाहर्ने मान्छे हुँ । त्यहाँका भट्टीहरूको अन्तिम ग्राहक मै हुन्थेँ । तर, अहिले मदिराबाट डिभोर्स लिइसकेको छु ।
साथीहरूसँग बसेर रक्सी खाँदा कत्तिको मज्जा आउँथ्यो ?
साथीहरूसँग भन्दा एक्लै बसेर खान मज्जा आउँथ्यो ।
एक्लै रक्सी खानेलाई त ट्वाँके भन्छन् नि ?
म एकान्तप्रेमी हुँ । साथीहरूसँग बस्दैबस्दिनँ भन्न खोजेको होइन कि रक्सी खाँदा बस्न मन पर्दैन मात्र भन्न खोजेको हुँ ।
जिन्दगीमा बिँडी खानुभयो ?
घाटमा स्वयं आफू मात्र भइन्छ । मित्र, दुस्मनभन्दा टाढा भइन्छ । सांसारिकताभन्दा अलि बढी जीवनलाई हेर्ने नेपथ्यजस्तो हुन्छ । मैले मृत्युमाथि धेरै लेखेको छु । त्यसैले मृत्यु चिन्तनका लागि घाट उपयुक्त स्थान हो । धेरैपटक मैले घाटमै रात बिताएको छु ।
धेरै खान्थेँ । कसैले खाइरहेको देखे भने अहिले पनि मागेर खान्छु । तर, बिँडी बोकेरचाहिँ हिँडिनँ ।
तपाईं धेरैजसो घाटका बारेमा लेख्नुहुन्छ । किन ?
घाट म गइराख्ने ठाउँ हो । मलाई निकै मनपर्छ । घाटमा गएपछि वैराग्यताको अनुभव हुन्छ । हाम्रो एउटा घर छ, आफ्नो इष्टमित्र छन्, प्रेमिकाहरू छन्, तर घाटमा स्वयं आफू मात्र भइन्छ । मित्र, दुस्मनभन्दा टाढा भइन्छ । सांसारिकताभन्दा अलि बढी जीवनलाई हेर्ने नेपथ्यजस्तो हुन्छ । मैले मृत्युमाथि धेरै लेखेको छु । त्यसैले मृत्यु चिन्तनका लागि घाट उपयुक्त स्थान हो ।
कहिल्यै घाटमा रात बिताउनुभएको छ ?
धेरैपटक मैले घाटमै रात बिताएको छु । युवावस्थामा त मेरो धेरैजसो जोगी साधुसन्तहरूसँगको संगत थियो । त्यसरी बस्दा निकै मज्जा आउँथ्यो । मज्जाकै लागि २०, २१ वर्षको उमेरमा घाटमै रात बिताउँथेँ ।
राजनीतिबारे किन लेख्नुहुन्न ?
राजनीतिप्रति मेरो चासो नै भएन । मलाई राजनीतिभन्दा घाट प्यारो लाग्छ । अहिलेसम्म मैले जे काम गरेको छु त्यो आफ्नो इच्छाले गरेको छु ।
यौनका बारेमा खुलेर लेख्नुहुन्छ । यौनबारे लेख्न यति धेरै आशक्ति किन ?
आशक्ति होइन । लेख्नेक्रममा त्यस्ता कुराहरू आयो भने लेख्छु । जुन मेरो व्यक्तिगत रुचिको विषय पनि हो । मानिसहरू बाहिरचाहिँ आदर्शको कुरा गर्छन् तर, भित्र अर्कै कुरा हुन्छ । मलाई यस्ता दोहोरो चरित्र भएको मानिस मन पर्दैन । यौन भन्ने कुरा म आफूमा स्वयं हो, त्यहि कुरालाई बाहिर ल्याएको हुँ । म जस्तो छु त्यस्तै लेखेँ ।
आफ्नो प्रेमिकाको बारेमा पहिचान नै खुल्ने गरी लेख्नुभयो नि ?
म प्रेमिकाको बारेमा सहजै लेख्छु । एकजना मीरा भट्टराई भन्ने विवाहित महिला मेरो प्रेमिका हुनुहुन्थ्यो । म उहाँसँग प्रेम गर्थें । त्यो कुरा लेख्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन ।
मानिसहरू बाहिरचाहिँ आदर्शको कुरा गर्छन् तर, भित्र अर्कै कुरा हुन्छ । मलाई यस्ता दोहोरो चरित्र भएको मानिस मन पर्दैन । यौन भन्ने कुरा म आफूमा स्वयं हो, त्यहि कुरालाई बाहिर ल्याएको हुँ । म जस्तो छु त्यस्तै लेखेँ ।
विवाहित महिलासँगै चाहिँ किन प्रेम गर्नुभयो ? अविवाहित युवती पाउनुभएन र ?
प्रेममा उमेर घटी–बढी, यो जात त्यो जात, विवाहित, अविवाहित भन्ने कुरा हुँदैन । मानिसले प्रेमलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।
प्रेमिकाले पढेर गाली गरिनन् ?
उनले पढिन् कि पढिनन् मलाई थाहा छैन ।
जीवनमा कतिवटी प्रेमिका बनाउनुभयो ?
गन्ती गरेको छैन । भए होलान् सात आठवटी ।
कुनै युवतीले तपाईंलाई सेक्सको अफर गरेका छन् ?
सीधै अफर गरेका त छैनन् ।
यसमा श्रीमतीको कुनै गुनासो थिएन ?
गुनासो हुने कुरै छैन । म जोसँग पनि खुलेर कुरा गर्छु भन्ने उनलाई थाहा छ । मैले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा मेरो पहिलो सम्भोग वेश्यासँग भएको होे भन्दिन्छु । त्यसैले त्यस्तो कुनै गुनासो छैन ।
श्रीमतीलाई सँगै घुमाउन लानुभएको छ ?
श्रीमतीसँग धेरै घुमेको छु । विवाह गरेपछि मैले अरूको श्रीमती घुमाउन लगेको छैन । आफ्नो श्रीमतीलाई मात्र घुमाएको छु । तर, पहिलापहिला आफूभन्दा जेठी महिलाहरूसँग प्रेम गर्न मन लाग्थ्यो ।
यौनसम्बन्धी पुस्तक कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
पढ्नुपर्छ र पढ्छु पनि ।
कुन उमेरदेखि यौनका पुस्तकहरू पढ्न थाल्नुभयो ?
१५–१६ वर्षको उमेरदेखि नै यौनका पुस्तकहरू पढ्न थालको हुँ । त्यो वेला रमाइलोका लागि पढ्थेँ, बिस्तारै चिन्तन गर्न थालेँ ।
विवाह गरेपछि मैले अरूको श्रीमती घुमाउन लगेको छैन । आफ्नो श्रीमतीलाई मात्र घुमाएको छु । तर, पहिलापहिला आफूभन्दा जेठी महिलाहरूसँग प्रेम गर्न मन लाग्थ्यो ।
यौनका पुस्तकचाहिँ कहाँ पाउनुहुन्थ्यो ?
पुस्तक पसलहरूबाट किनेर पढ्थेँ ।
अरूले देख्ला कि भन्ने लाज लाग्दैन थियो ?
लाज किन लाग्नु नि । त्यो मेरो रुचिको विषय हो ।
सेक्ससम्बन्धी भिडियोहरू पनि हुर्नुहुन्थ्यो ?
पहिला धेरै हेर्थेँ । म त क्यासेट पसलहरूमा गएर सीधै ब्लु फिल्म छ कि छैन भनेर सोध्थेँ । आफूलाई इच्छा लागेको कुरा हेर्न किन अरूको लाज मान्नुप¥यो र ?
कुन समयमा हेर्नुहुन्थ्यो ?
धेरैजसो साँझपख हेर्थेँ ।
तपाईंलाई सबैभन्दा कामुक लाग्ने नेपाली नायिका ?
नेपालमा कामुक नायिका कोही पनि छैन ।
कुनै नेपाली नायिकाले डेटिङको अफर गर्ने हो भने ?
कसैसँग पनि डेटिङ जान मन छैन ।
तपाईंको पछिल्लो समयको प्रेमिकाको बारेमा बताइदिनुस् न ?
अहिले कोही पनि प्रेमिका छैन ।
तपाईंलाई कस्ताखालका केटी मनपर्छ ?
मलाई बौद्धिक, सुन्दरी, रहस्यमय, फिलोसपी, कलाजस्ता कुरा बुझेको केटी मनपर्छ ।
सबैभन्दा मन नपर्ने चिज के हो ?
मन नपर्ने चिज केही पनि छैन ।
मलाई घरको चिया कहिल्यै मन पर्दैन । साथै, चियाका पारखीहरूले कहिल्यै पनि घरमा चिया नखानु उचित हो । पाटनका धेरै चिया अड्डाहरू छन् । जहाँको चिया खाँदा मज्जा आउँछ । मलाई सानासाना गल्ली मनपर्छ । त्यस्ता गल्लीहरूमा चिया खाँदा छुट्टै आनन्द आउँछ ।
मालाप्रति तपाईंको यति साह्रो मोह किन ?
मोहभन्दा पनि मनपर्ने चिज हो । मलाई प्रीय लाग्ने चिजहरू गर्न र लगाउन मनपर्छ ।
सबैभन्दा महँगो कति मूल्यको माला लगाउनुभएको छ ?
मूल्यसँग कुनै सम्बन्ध छैन । पाँच, सात–सयदेखि २५ सयसम्मको माला लगाउँछु ।
अक्सर कालो लुगा लगाउनुहुन्छ । कालो लुगामा यति धेरै मोह किन ?
कालो रङको कुरा हो । मलाई कालो कलर मनपर्छ । त्यसैले कालो कपडा लगाउँछु ।
तपाईंले चिया पिउने गल्लीहरू कुन–कुन हुन् ?
मलाई घरको चिया कहिल्यै मन पर्दैन । साथै, चियाका पारखीहरूले कहिल्यै पनि घरमा चिया नखानु उचित हो । पाटनका धेरै चिया अड्डाहरू छन् । जहाँको चिया खाँदा मज्जा आउँछ ।
कुन ठाउँको चिया एकदमै मीठो लाग्छ ?
यही ठाउँको चिया मनपर्छ भन्ने छैन । मलाई सानासाना गल्ली मनपर्छ । त्यस्ता गल्लीहरूमा चिया खाँदा छुट्टै आनन्द आउँछ ।
डेरामा बसेर भाडा नतिरी भाग्नुभएको छ कि छैन ?
त्यस्तो छैन ।
भाडाको विषयमा घरबेटीसँग किचकिच कत्तिको पर्छ ?
पहिला–पहिला पथ्र्यो । अहिले म यहाँ बसेको १२ वर्ष भयो । अहिलेसम्म परेको छैन ।
कथाले मागे मलाई बेडसिन दिन कुनै आपत्ति छैन
डगी स्टाइलमा सेक्स गर्दा मज्जा आउँछ – हास्यकलाकार महादेव त्रिपाठी
‘लभलेटर आउँथे, साथीलाई पढ्न लगाउँथें’ – शान्ता चौधरी